Black Friday: Ihe kacha mma na-enye na akpaaka ụlọ na ụda | Akụkọ Ngwa
El Black Friday Ọ dị nso n'akụkụ akuku, ma ọ bụ ezie na nke a yiri ka ọ na-adịte aka, oge a anyị chọrọ ịga n'ihu na nchịkọta na-adọrọ mmasị. Dị ka ọ bụla n'afọ, anyị na-ele anya azụ na-achọ na-enye na ndị na ngwaahịa na anyị na-agbalị na anyị nwere ike na-akwado na nnọọ ezi obi na nke a bụ n'ihi.
Ndị a bụ azụmaahịa Black Friday kacha mma n'ihe gbasara akpaaka ụlọ na ụda, guzobe ụlọ smart gị ma nwee ọmarịcha egwu. Agbagharala ha, n'ihi na oge eruola ịchekwa obere ego site n'ịzụta ihe ị na-achọ mgbe niile.
1 Amazon Echo Show 5 - Anya mbụ na Alexa
2 Roborock S7 - Onye na-ehicha ihe mgbochi robot kacha
3 Jabra Elite 85t - Ngwaahịa gburugburu
4 Ngwaahịa Sonos dị iche iche
5 Huawei WiFi AX3 - yana WiFi 6 maka egwuregwu na akpaaka ụlọ
6 FreeBuds nke ụdị na agba niile
7 Nnukwu onyinye ndị ọzọ ị na-ekwesịghị ileghara anya
Amazon Echo Show 5 - Anya mbụ na Alexa
Ihe ngosi Amazon Echo bụ otu n'ime ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị n'etiti ndị na-ejikọta ụda na akpaaka ụlọ n'otu ngwaahịa ahụ. N'okwu a, anyị nwere ngwaike ụda nke Amazon Echo Dot tinyere obere ihuenyo inch ise, chepụta ihe atụ ka ị nwee ike ijikwa ngwaọrụ IoT anyị, jikwaa YouTube ma ọ bụ na-agafe Spotify n'ụzọ agile na dị mfe, ihe na- na-egwuri egwu nke ukwuu maka ngwaọrụ a.
Ihe ngosi Amazon Echo Show 5 (2021) nwere ọnụ ahịa mbụ karịa euro 89 na ugbu a Ọ bụ naanị 44,99 euro, nke bụ mbelata dị ukwuu maka otu n'ime ngwaọrụ ndị na-adọrọ mmasị yana uru kachasị mma maka ego Amazon nwere na katalọgụ ya.Lelee nyocha anyị n'ihi na ị nwere ike nweta otu.
Roborock S7 - Onye na-ehicha ihe mgbochi robot kacha
Roborock S7 ọhụrụ bụ nzọ kacha agụsi agụụ ike sitere na ika nke jisiri ike nweta niche dị mkpa n'ahịa nke juputara na igwe nhicha ikuku robot. Anyị anwalela ihe nlereanya a na ọ na-asachapụ nke ọma, ọ nweghị nsogbu arụmọrụ yana nnwere onwe dị nzuzu. Ihe a niile na-esonyere ọtụtụ mmelite ngwanrọ na ọbụnadị ọdụ ụgbọ mmiri a ma ama Akpaaka nke ga-amasị umengwụ nhicha ọ bụla.
Ugbu a ọ nwere mbelata nke euro 150, yabụ Ị nwere ike ịzụta ya maka euro 499,00, nnukwu mbelata nke site n'echiche m, ọ bụ ihe nhicha ikuku robot kacha mma nke afọ 2021. Agbagharala nyocha anyị, n'ihi na n'ime ya ị nwere ike ịchọpụta ma ọ bara uru n'ezie.
Jabra Elite 85t - Ngwaahịa gburugburu
Enweghị m ike ịkọwa ya n'ụzọ ọzọ, Igwe ekwe ntị Jabra Elite 85t na-anya isi atụmatụ ndị dị n'ebe ahụ nwere oke kachasị elu. Jabra adịlarị na ịdị mma na nke a, otu n'ime ngwaahịa ya kachasị mma na katalọgụ dum, ọ gaghị adị ntakịrị. Anyị nwere kagbuo mkpọtụ na-arụ ọrụ, batrị na-adịte aka na ihe a niile na-esonyere otu n'ime ngwa zuru oke na ahịa maka nzube a.
Ụda ụda dị oke mma ma ọ bụ ezie na nhazi ahụ dị ntakịrị ize ndụ, ọ na-egosi ọdịiche dị na ihe dị mkpa, ihe niile metụtara ọdịyo ahụ. Ha nwere ọnụ ahịa mbụ nke euro 228,99, mana Site na mbelata 35% ị nwere ike zụta ha naanị 149,99 n'ime izu Black Friday a na Amazon.
Ngwaahịa Sonos dị iche iche
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kacha mma n'ịdị mma, ọnụahịa na njikọta, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ Sonos. N'ebe a, anyị enyochala ngwaahịa dị iche iche, mana oge a, anyị ga-elekwasị anya na ndị nwere nnukwu ego. gbakwunyere 20% kwụsịrị ngwa Sonos ewepụtala maka ndị ọrụ niile na-ekpebi ịzụta site na webụsaịtị ya yana ụfọdụ mbelata dị ukwuu na ya Anyị bụ Roam.
Maka akụkụ nke ya, ọkacha mmasị m n'afọ a bụ Sonos doo ọgbọ nke abụọ, ogwe ụda dị ike, zuru oke ma soro ya Dolby Atmos na ndị na-enyere aka mebere ndị dị ka Google Assistant na Amazon Alexa, na-echefughị ​​ndakọrịta ya na Apple HomeKit. Ị nwere mbelata ihe karịrị 30% na Amazon ka ị nwee ike zụta ya naanị 369 euro.
Huawei WiFi AX3 - yana WiFi 6 maka egwuregwu na akpaaka ụlọ
Na ngwaahịa a anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọkọlọtọ WiFi 6 con 802.11ax / ac / n / a 2x2 na 802.11ax / n / b / g 2x2 na MU-MIMO,ọ dịghị ihe ọzọ na ihe na-erughị. Ihe nhazi nke na - eme ihe niile a bu GigaHome Quad-isi 1,4 GHz nke ga-ahụ maka ikesa akara ngosi ahụ n'ụzọ amamihe, yana ikwe ka anyị nwee ọ enjoyụ na atụmatụ nke ngwa AI AI nke Huawei nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. Naanị ihe fọdụrụ ikwu, ọ bụ ezie na anyị ekwuola maka ya, bụ na anyị nwere NFC na ntọala ya.
Mbelata na Ụlọ Ahịa Huawei nke ahụ na-enye gị ohere ịzụta ya naanị 39,90 euro na nnyefe ozugbo na ụlọ ahịa ha, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ iziga ya n'ụlọ. Mbelata 60% na Amazon ebe ị nwekwara ike zụta ya maka euro 39,99. N'ezie, ọ bụrụ na ị ka nwere rawụta ụlọ ọrụ gị, ọ na-ewekwa oge iji gaa na ụdị kachasị ọhụrụ dị na WiFi 6.
FreeBuds nke ụdị na agba niile
Igwe ekwe ntị TWS, nke nwere kagbuo mkpọtụ, na ntị, ọdịnala ... Ị nwere ụdị enweghị ngwụcha na oke FreeBuds, ekweisi Huawei na anyị anwalela ha niile, anyị na-akwado ihe ndị a dị ka mmasị gị na mkpa gị si dị:
Buds Pro efu: Ogo ụda na-enweghị atụ, kagbuo mkpọtụ kachasị elu na ahịa yana ọnụahịa kacha mma, ị nwere ike ịzụta ha. n'okpuru 99 na ụdị isi awọ ya na ụdị ọcha ya. Nhọrọ maka ọtụtụ gourmets.
Buds efu 4: Igwe ekwe ntị nke ọkara nwere kagbuo mkpọtụ na-arụ ọrụ mana ọ bụghị nke na-agafe agafe, sistemụ igwe dị mma na sistemụ nhazi ọgụgụ isi maka ndị nwere ntụsara ahụ na-ahọrọ iso ha rụọ ọrụ ụbọchị niile, maka naanị euro 109.
FreeBuds 4i: Ịzụta smart, na kagbuo mkpọtụ, nnukwu nnwere onwe, nkasi obi na karịa ihe niile na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. naanị euro 49.
Nnukwu onyinye ndị ọzọ ị na-ekwesịghị ileghara anya
Nrọ T20: Igwe na-ehicha ihe dị ike, nke nwere ọtụtụ ngwa maka, ikike mmịpụta na-esonyere ya na ngwa niile dị mkpa maka nhicha kachasị kwa ụbọchị, na-enweghị mgbagha na-akwado usoro Dyson ọzọ. naanị 254 euro na Amazon.
Amazon Fire TV Stick Max: Ọ bụrụ na anyị na-amụ ịzụrụ TV Stick nkịtị n'ihi na anyị achọghị ihe karịrị ọdịnaya HD zuru oke, ọdịiche ahụ dị ịrịba ama. Ugbu a na WiFi 6 na Dolby Atmos dakọtara na ike niile na ndozi oge niile, ọnụ ahịa ọchị naanị 38,99 euro (mbelata 40%).
Nke anọ Gen Amazon Echo: Nkwughachi Amazon bụ nhọrọ mbụ Amazon na-enye gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ụlọ ejikọrọ site na Zigbee na-enweghị ịchụ àjà dị mma nke na-enye gị ohere ige egwu. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ na-enye ọnụ ahịa dị elu, mana ọ toro ma e jiri ya tụnyere nke gara aga, anyị nwere ọgbọ nke anọ Amazon Echo Dot site na .59,99 XNUMX (BUYE).
N'otu ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ịgafe maka ngalaba nyocha anyị ebe ị ga-ahụ ngwaahịa ndị anyị nyochara n'ime afọ niile na na n'enweghị obi abụọ ọ bụla nwere ike iyi ka ọ bụ ihe ọzọ na-adọrọ mmasị ugbu a na ebelatala ọnụ ahịa maka Black Friday.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Black Friday: onyinye kacha mma na akpaaka na ụda ụlọ
Dreame T20, ihe nhicha aka dị elu yana arụ ọrụ [Analysis]